တာချီလိတ်တွင် ဂိုဒေါင်အတွင်း လက်နက် ခဲယမ်းများနှင့် အတူ ကျပ် ၁၆၀၇ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ မူး? - Yangon Media Group
တာချီလိတ် နိုဝင်ဘာ ၂၅
ရှမ်း ပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တာချီလိတ် မြို့၊ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်၊ ဟုမ်း မတ်လမ်း၌ လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့် အတူ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၆၀၇ ကျော်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ ကြောင်း မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စုမှ သိရသည်။
မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၃၀)တာချီလိတ်မှ ရဲတပ်သား သုမောင်ပါဝင် သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် သက် သေများနှင့်အတူ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် ညနေ ၄ နာရီခန့်တွင် တာချီလိတ်မြို့၊ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်၊ ဟုမ်းမတ်လမ်းရှိအားချူ ငှားရမ်း နေထိုင်သော ဂိုဒေါင်အတွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးရှာဖွေရာအားချူနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံသား ကိုင် (ခ)Mr.Prasan တို့ကို ဂို ဒေါင်အတွင်းရှိ ထမင်းစားပွဲဘေးတွင် ထိုင်လျက်တွေ့ရပြီး ၎င်းင်းတို့ နှစ်ဦးကြားစားပွဲပေါ်မှ CZ 2075 PAMIP 9_19 စာတန်းပါ CZE-CH နိုင်ငံလုပ် ပစ္စတိုသေနတ်တစ်လက်နှင့် နံပါတ်A3100 9ÄÄ နှင့် 9MM Luger စာတန်းပါ ပစ္စတို ကျည် ၁၂ တောင့် ထည့်လျက် ကျည်ကတ်တစ်ခု၊ ကျည်ကတ်အပိုတစ် ခုတို့အားတွေ့ ရှိရပြီး ဆက်လက်ရှာဖွေရာ ကျည်မျိုးစုံ အတောင့် ၃၁၀ ၊ စိတ်ကြွ ဆေးပြား ၆၂၂၀၀၊ အလေးချိန် ၆ ဒသ မ ၂၂ ကီလို၊ စိတ်ကြွဆေးမှုန့် အလေးချိန် ၂ ဒသမ ၁ ကီလိုခန့်၊ အက်တက်စီ (Ecstasy)ဆေးပြား ၉၀၀ ပြား၊ ဘိန်းညိုဘလောက်တုံး ခုနစ်တုံး၊ အလေးချိန် ၂ ဒသမ ၃၁ ကီလို ခန့်၊ ကဖင်း ၁၆ ကီလိုခန့်၊ အဖြူ ရောင် အနံ့မှုန့်အလေးချိန် တစ်ကီလို၊ VANILINE အဖြူရောင် အနံ့မှုန့်အလေး ချိန် ၃၅ ကီလိုခန့်၊ အနံ့ဆေးရည်အလေးချိန်လီတာ ၂၀ ခန့်၊ မော်တာ တပ်ဆင်လျက် ဆေးပြားရိုက်စက်နှစ်လုံးနှင့် အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ထိုင်းဘတ် ငွေ ၁၀၀၀၀ နှင့် အမေရိကန်ဒေါ် လာ ၁၁ ဒေါ်လာ ၊ မော်တော် ယာဉ်နှစ်စီး၊ စုစုပေါင်း ငွေကျပ်သိန်း ပေါင်း ၁၆၀၇ ဒသမ ၂၃၅ ခန့် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသူ အားချူ (၅၁) နှစ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသား Mr.Prasan (၄၄) နှစ်၊ ဆီမုန်း ချွန်းရပ်ကွက်၊ မယ်ဆိုင်မြို့၊ ထိုင်း နိုင်ငံနေသူတို့အား တာချီလိတ်မြို့ မရဲစခန်းက မယ(ပ) ၇၄/၂၀၁၇၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၅/ ၁၆(ခ)/၁၉ (က)/၂၀ (က)/၂၂ (ခ)/၂၁ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောဒေသ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် အလှူငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ခြောက်ထောင် ရရှိထားဟု ?
ချင်းတွင်းမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ် ရောက်လာ၊ ခရီးသည်တင်နှင့် ကုန်တင်ရေယာဉ် ၆ဝဝ ကျော် ပြေးဆွဲမ??